အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ကနေတဲ့ မိန်းမငယ်
ဒန်းစင်းလေဒီ လို့ ခေါ်ကြတယ်
ကမယ် ခုန်မယ် သီချင်းဆိုမယ်
ဘဝတာ တိုလဲ တိုပါစေကွယ်
ခုတလော မမပန်ပန် ရဲ့ ဖဘ ကို ခဏခဏ ရောက်ပါတယ်။ တနေ့ကလဲပုံတပုံ အမြတ်ထုတ်ပြီးကဗျာ ရေးပါတယ်။မဘတ်လိုက်ရတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီမှာပါ
ဒီနေ့လဲ ထပ်ရောက်တော့ နောက်တပုံ ကိုမန့်ရင်းနဲ့ ကဗျာ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကလေးဆန်ဆန်ပဲ ရေးထားတာပါ။ ရိုးရိုးတွေးပြီး ရိုးရိုးပဲ တင်ပြပါတယ်။ အဖွဲ့အနွဲ့ထက် အကြောင်းအရာ ပိုစောင်းပေးထားတာပါ။ ကိုယ်ကလဲ ကဗျာဆရာ နာမည်ခံနိုင်တဲ့ အဆင့်မရှိပါဘူး။ ရောက်ရာ ပေါက်ရာ လျောက်ရေးပါတယ်။ အမန်နျူရယ်ပေါ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့် ကဗျာတွေက တကယ့် အဒိုလန့်စန့် ပါပဲ အရင်ကလဲ မွေးနေ့ ဆုတောင်းကဗျာတွေ ရေးပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကာရံမဲ့ထက် ကာရံနဲ့ ကဗျာ တွေ ကိုပိုကြိုက်တတ်ခဲ့တယ် (သစ္စာနီ တို့ ဘာပြောပြော အဟိ) ငယ်ငယ်က မိုးသောက်ပန်း တေဇ တို့ကျောင်းသား ရွှေသွေး မင်္ဂလာမောင်မယ်တွေ ဘတ်တာများလို့
ပုံတွေ သုံးခွင့်ပြုတဲ့ မမပန်ပန် ကိုကျေးဇူး အထူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်။
Posted by တီချမ်း at 11:08 AM
တကယ်တော့ ကိုယ် သိပ်သိပ်...
Some pills for me???
ဟောင်းရှော...? (ကိုယ်တိုင်မေး ကိုယ်တိုင်ဖြေ)
ရှမ်းတို့ အကြိုက် တီ့ အကြိုက် ဝက်နံရိုး ပိန္နဲသီး ဟ...